Ligandrol LGD-4033 nke Reflex Labs | 10mg | 90 Capsules
Reflex Labs Ligandrol LGD-4033 10mg 90 Capsules - Achọpụta Ihe Nleba Anya
Aha Ndabere - .49.99 XNUMX GBP ibu
Ịgachi price £ 49.99
ma ọ bụ 6 kwa izu-enweghị mmasị ịkwụ ụgwọ site na £ 8.33 na
Kedu ihe bụ Ligandrol LGD-4033?
Otu n'ime SARM kachasị ike na ahịa, Anabolicum/ Ligandrol (LGD-4033) abughi nke abuo obula mgbe obula n’eme ka aru ike di ike ma nwegharia ike. Mmetụta nke SARM a nwere ike ịmalite site na ọnwụ dị egwu na ịmalite mgbanwe mgbanwe ahụ. N'ime oge a na-atụ egwu, ndị bodybuilders nwere ike ịtụ anya inweta ahụ ike na ike nweta nke nwere ike ịchekwa ngwa ngwa na ogologo oge mgbe ejikọtara ya na macronutrients na calorie ziri ezi.
LGD-4033 na-arụ ọrụ site na njikọta na ndị na-anabata etrogen na ahụ na ọkpụkpụ na anụ ahụ. SARM a dịkwa oke irè iji gbochie mmebi ahụ. Anabolicum nwere oke ọkpụkpụ dị ike na ọgwụgwọ.
Uru nke Anabolicum (LGD-4033)
Na-abawanye ahụ ike ahụ.
Enwekwu ahụ ike.
Mmezi ike ngwa ngwa.
Na-enyere aka ịnọgide na-enweta ụgwọ ọrụ siri ike.
Na-egbochi ọkpụkpụ ọkpụkpụ.
Irè ịgwọ erughị testosterone.
Nke kachasị mma imezi ọdịiche dị n'etiti usoro cycles.
Anaghị akpata nsị imeju.
Anaghị emetụta ọkwa kọlesterol, akụrụ, prostate, ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
Etu esi eji Anabolicum (LGD-4033)?
A na-eji Anabolicum mee ihe nke ọma na izu nke 8-12 site na ụmụ nwoke na izu 6-8 site na ụmụ nwanyị ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị iche dabere na mmasị onye ọ bụla na usoro okirikiri.
Ọgwụ maka Menmụ nwoke
Ngwadogwu Anabolicum a na-atụ aro bụ 5-10mg kwa ụbọchị, ọkacha mma 30-40 nkeji tupu mgbatị na mgbe nri, na izu asatọ ruo izu iri na abụọ maka ụmụ nwoke.
Ọgwụ maka Womenmụ nwanyị
Maka ụmụ nwanyị, ọgwụ Anabolicum na-atụ aro bụ 2.5-5mg kwa ụbọchị, ọkacha mma 30-40 nkeji tupu mgbatị na mgbe nri, na izu isii ruo izu asatọ.
Ọkara Ọkara Ndụ
Ọkara ndụ nke SARM a bụ ihe dị ka awa 25-30 ma yabụ otu ugboro kwa ụbọchị ịsingụ ọgwụ dị mma.
Anabolicum kachasị mma na SARM dịka Cardarine, Ostarine, na Testolone. LGD-4033 kachasị mma na Nutrobal (MK-677) na nchịkọta nchịkọta maka mmetụta mmekọrịta. Usoro a ga - enyere aka n’ịzụlite akwara siri ike na ogo ahụ ma meziwanye mgbake, echiche nke ịdị mma, na ụra ụra.
Ndị ọrụ LGD-4033 ekwupụtala nnukwu mmụba n'ihe metụtara oke akwara na ike. Dika ntughari na ntaneti banyere ndi SARM a ma ama na ndi mmadu na-aru aru, ndi oru jiri ihe ha nwere abuba na aru aru dika obere dika izu ano na isii. Usersfọdụ ndị ọrụ kwuru na ikike ha nwere ijikwa mgbatị siri ike site na 40 ruo 50 percent. Site n'iji SARM a ruo izu isii na asatọ, ndị ọrụ nwere ike ịtụ anya na ọ ga-esikwu ike, dị ọcha, ma melite vaskụla n'oge oge ịkụcha.
Anyị na-akwado Obere PCT na ngwaahịa a. 4-6 izu adabara.
Dabere na 85 nyocha
SDXXII D. Nyochaa site SDXXII D.
AKW EKWỌ Ọgwụgwụ
Enwere m ike ịkwado ngwaahịa a n'ezie enwere m ike karịa na ubu m bidoro inwe obi ike karịa na m ga-azụta 100% ahụ ọzọ yana ọ gaghị enwe ike gafere hormone ur body ma ọ bụrụ na ị na-etinye ya nke ọma, oke mma!
Simon Simon nyochaa
Ngwaahịa zuru oke ..... ezigbo uru maka ego ..... ntụpọ na ụzọ mbufe .... iwu ikpeazụ mechara rute mgbe otu ọnwa gachara ... ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na egbochiri ya na kọstọm .... M ga-ahọrọ mbupu na by express courier .... ọtụtụ ụbọchị echere ...
Ugonna Onyekwere Nyochaa site Yessica Gonzalez C.
Ometọ 20 mg en un ciclo de 12 semanas con 20 mg de Ostarine.
Meghee Video nke Yessica Gonzalez C. na modal
Germán M. Enyocha site Germán M.
Buen producto a muy buen precio. Cece resultce
Michael G. Nyochaa Michael G.
ìgwè dị egwu, nnukwu ọrụ, nnyefe ọsọ ọsọ na-atụ aro nke ukwuu nye onye ọ bụla, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ onye na-azụ ahịa nke nwere ike izute mgbakwunye gị, na oge na mmefu ego na nnukwu ngwaahịa dị mma ịtụ ahịa taa, ị gaghị enwe mmechuihu